Anyị na -akpọpụta LEAGOO T5! | Androidsis
Anyị na-akpọ LEAGOO T5!
Ọ bụrụ na izu ole na ole gara aga, anyị mara ọkwa Leagoo T5 presaleTaa, anyị na-ewetara gị a nnọọ mma na anya n'ihi na ndị niile na-agụ nke a website ... na Olee maka a unit nke Leagoo T5 kpam kpam free na na i nwere ike imeri dị nnọọ ịbụ onye na-eso ụzọ a website. Maka ndị niile na-amaghị ya, T5 bụ a obere-ọkara-nso ama nke ahụ na -enye anyị Sharp IPS FullHD nke 5.5 ″, 4 GB nke Ram na 64 GB nke ROM. Ọnụ ahịa ya siri ezigbo ike, ebe ọ bụ ugbu a ị nwere ike zụta naanị € 130 na ire ere.
Want chọrọ ịma ka esi emeri ama a? Ọfọn, na-agụ isiokwu a ebe ọ bụ na isonye dị mfe.
1 International see
2 Olee otu iji merie Leagoo T5?
3 Kedu mgbe asọmpi ahụ ga-akwụsị?
4 Nka na ụzụ e ji mara ndị Leagoo T5
Nke mbu, agwa gi ya ihe osise a bụ mba ụwa ka ndị niile gụrụ anyị nwee ike isonye n'akụkụ ọ bụla n'ụwa. Ọ dịghị mkpa na ị bi na mpụga Spain, ugbu a ị nwere ike iburu ọnụ a n'ụlọ gị n'efu.
Olee otu iji merie Leagoo T5?
Itinye aka dị mfe, naanị ị ga - agbaso ntuziaka ndị dị mfe na ndị na - esonụ Gleam.io na ọ bụ ya. Enwere naanị ọnọdụ 3 dị mkpa iji zute nke ahụ ga-ewe gị naanị 1 nkeji, gịnị ka ị na-eche?
LEAGOO T5 Bịaruo
Kedu mgbe asọmpi ahụ ga-akwụsị?
Can nwere ike isonye na asọmpi a rue mgbe ọnwa Ọgọstụ ọzọ dị na 2:23. Enwere naanị otu izu asọmpi, yabụ ahapụla ya maka oge ọzọ ma sonye ugbu a.
Nka na ụzụ e ji mara ndị Leagoo T5
Usoro njikwa Android 7.0 Nougat na Leagoo OS 2.1 nhazi akwa
Ihuenyo Nkọ 5.5 "FullHD IPS na teknụzụ 2.5D na nchekwa Corning Gorilla Glass 4
Nhazi Mediatek 6750T Octa Core na 1.5 Ghz ọsọ ọsọ elekere na 64-bit ije
Nchekwa n'ime 64 Gb na nkwado maka MicroSD ruo 256 Gb nke ikike nchekwa kachasị
Igwefoto na-aga n'ihu Igwefoto azụ abụọ nke Sony nke 13 + 5 mpx fost aperture 2.0 rụpụtara
Igwe n'ihu 13 mpx na akpaaka-mma mode 2.0 gbadoro oghere na 79.9º obosara
Njikọ Dual SIM 2 Nano SIM nọrọ na njikere ma ọ bụ Nano SIM + MicroSD - 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz 3G: WCDMA 850/900 / 2100MHz 4G: FDD-LTE 800/850/900/1800/2100 / 2600MHz TDD-LTE B40 - Bluetooth 4.0 - GPS na aGPS GLONASS - WIFI: 802.11b / g / n internet ikuku - OTG - OTA
Atụmatụ ndị ọzọ Mkpịsị aka Mkpịsị aka na Home Button - Ambient Light Sensor - E-kompas - Nnukwu mpo ihe mmetụta - Nso nso ihe mmetụta - Awinic Audio Mgbawa -
Batrị LG rụpụtara ya site na 3ooo mAh 5V2A na-ewepu ya
Akụkụ X x 153 76.1 7.9 mm
Ahịa Ugbu a ị nwere ike zụta ya na euro 130
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ntugharị » Anyị na-akpọ LEAGOO T5!
M na -ekere òkè, daalụ! Mmmmmmmmmm
Ọ masịrị m na ọ bụ sim abụọ, 4gb nke ebule yana 64 nke ebe nchekwa nwere ike ịgbasa, nchebe nke Corning Gorilla Glass 4 na ihuenyo 5.5 ″ Sharp IPS FullHD yana na ọ nwekwara onye na -agụ mkpịsị aka.
Zaghachi Giorgio Tulio Scampini Chin Aleong
ekele maka ịme nke a maka ndị na-ege gị ntị?
Zaghachi Edgar Cervantes
Ngwaọrụ a ọ dị mma? Daalụ maka eserese ahụ?
Ihe kacha masị m - 5.5 ″ Sharp IPS FullHD nwere teknụzụ 2.5D yana nchekwa Corning Gorilla Glass 4
Samsung gbatịpụrụ ikike nke QLED telivishọn n'ụwa niile ruo afọ 10